Global Voices teny Malagasy » Farany izay ny filàn’ny tompon’ity fisotroana kafe ity vaniny ny aotista rahavavin’ny mpilatro malaza iray ao Rosia · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 23 Aogositra 2015 8:42 GMT 1	 · Mpanoratra Darina Gribova Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Fahasalamàna, Mediam-bahoaka, Sakafo, Akon'ny RuNet
Nampiasa ny lazany mba hanentana fanohanana hoan'ny rahavaviny i Vodianova. Nanoratra tao amin'ny Facebook,  namaritra ny zava-nitranga maharikoriko nihatra tamin'ny rahavaviny tao amin'ny trano fisotroana kafe iray izy tao anaty lahatsoratra izay efa olona maherin'ny 44.000 no nizara ny lahatsoratra ary maherin'ny 106.000 no nanao “tiako”. Araka ny voalazan'i Vodianova, mandany ny ankamaroan'ny androny amin'ny fitsangatsanganana ao amin'ny faritra manodidina ny tranony ny rahavaviny. Rehefa reraka izy, mitondra azy ao amin'ny trano fisotroana kafe akaiky indrindra ny mpikarakara azy. Tamin'ny herinandro lasa, raha iny handeha hipetraka sy haka aina izy ireo, nangataka tamin'izy ireo ny tompon'ny toerana hialan'izy ireo teo, nilaza tamin'ny mpikarakara an'i Oksana mba “hitsabo ny tenany [mpikarakara] sy ny zanany alohan'ny hisehoana vahoaka.”
“Andeha isika hanampy ireo fikambanana mpanao asa soa izay miasa isan'andro hanangana fiarahamonina iombonana ao Rosia – hanampy miaraka amin'ny faniriantsika ho lasa fiarahamonina tsy manavakavaka,” hoy i Natalia Vodianova nanoratra. Ity mpilatro malaza ity ihany no filohan'ny fikambanana Naked Heart Foundation , izay efa niasa hatramin'ny taona 2004 ary miezaka manova ny fomba fijerin'ny fiarahamonina ny olona manana fahasembanana. Tamin'ny 2011, rehefa nahazo hery tamin'ny fahafantarana ny zavamisy iainan'ny sembana tao amin'ny fianakaviany, nanomboka ny “fandaharanasa  “Me ndrika Hanana Fianakaviana Ny Ankizy Tsirairay” i Vodianova.
Tsy navelan'ny polisy ao an-toerana hiala maina anefa ilay trano fisotroana kafe. Vao haingana ny manampahefana avy ao amin'ny Rospotrebnadzor (Sampan-draharaha misahana ny zon'ny mpanjifa sy ny mahasoa ny olona ao Rosia) no nanao fisavana tao amin'ny trano fisotroana kafe “Flamingo,” ka nampandoa lamandy (voalaza fa 3 tapitrisa robla , na $ 45.000) noho ireo karazam-panitsakitsahana fehezan-dalàna hita, anisan'izany ny tsy fisian'ny fepetra fisorohana ny fahamaizana sy ny tsy fisian'ny fidirana natokana hoan'ny sembana.
Rehefa nanontaniana tamin'ny sazy henjana nahazo ny tompon'ilay trano fisotroana kafe i Natalia Vodianova dia nilaza  fa tiany raha sazy fanaovana asa mahasoa ny vahoaka no omena ilay olona. “Mandroso soso-kevitra aho mba hanoloana ny lamandy ho asa an-tsitrapo ao amin'ny iray amin'ireo toerana fandehanana avy mianatra ho an'ny tanora,” hoy izy nanazava. “Angamba mety hoe idealista aho, saingy mino aho fa mety hitondra soa ho azy ireo izany”.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/08/23/73241/
 3 tapitrisa robla: http://lifenews.ru/news/159479